Burmese taste - Iora: ငါးခူရဲယိုရွက်အုပ်အတု ဘူးသီးကြော် ငါးမြွေထုိုးကြော် ဂေါ်ဖီသုပ် နဲ့ မုန်ညင်းဟင်းခါး
Posted by Iora at 12:02 PM
စံပယ်ချို July 19, 2015 at 4:00 PM
မီးမီးငယ် July 20, 2015 at 9:03 AM
ဟုတ်ဘူး။ ရုိုးရုိုးငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် (ကုိုယ်က chili powder သုံးထားတာ ကုလားဆုိုင်ကလေ။)။
ကုိုယ်ဘူးသီးတစ်လုံးရယ် ပုဇွန်လေးတွေရယ်ကြော်စားဘုို့ ကြံနေတာ တခြားအရာတွေ ဖြိုနေရတာနဲ့ လုပ်ရသေးဘူး။
စကားမစပ် ပုဇွန်ခြောက်လှမ်းတာ ၂၀၀ ဒီဂရီလား။ ကုိုယ်ပြန်လာရှာတာ ရှာမတွေ့ လုို့ ။ မီးမီးလို လုပ်မလို့ လေ။
Anonymous July 21, 2015 at 5:39 AM
ကျမတော့ ၁၈ဝ လောက်ထားတာဘဲ..
မီးမီးငယ် July 20, 2015 at 9:06 AM
ကြက်သွန်မြိတ်ပင်တွေ ၇ စီးကို
မန့် လေကြိုက်လေ။ မန့် သာမန့် ..း)
အဲလိုတခါမှမရဘူးဆရာ ဒီမှာ။ ကုိုယ်က ၀က်သားနဲ့ ကင်ပေါင်းကြော်လုပ်စားချင်တာ။
ကုိုယ်တော့ လွယ်လွယ်ဝယ်ရတဲ့အဲဒီကေးလ်ရွက်ကို ပဲနည်းမျိုးစုံလုပ်စားနေတယ်။
Ma Tint July 20, 2015 at 7:23 PM
အော်... မြန်မာစာရှားပါးတဲ့ အမေရိကားမှာတောင် အိုင်အိုရာတစ်ယောက် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလုပ်စားတတ်တာ မြန်မာပြည်မှာသာဆိုရင်ဆိုတဲ့ အတွေးလေးဝင်လာတယ်...
မြန်မာပြည်မှာတုန်းက စားချင်တာအမြဲလွယ်လွယ်ရတော့ ကြိုးကြိုးစားစားဖန်တီးလုပ်စားတာမျိုးသိပ်မရှိဘူး။
မီးဖိုချောင်လည်းမ၀င်ဘူး။ လက်ဖက်သုပ်တာတို့ ဘာတုို့ လောက်သာလုပ်တာ။
ဒီမှာကျမှ ကုိုယ်လုပ်မှကုိုယ်စားရတော့ လျှောက်လုပ်ဖြစ်နေတာတီတင့်ရေ။
ရန်ကုန်နဲ့ ဖုန်းပြောရင်လည်း အုိုင်အိုရာ က ငါးခြောက်တွေ ငါးချဉ်တွေ ပုစွန်ချဉ်တွေကုိုယ်တုိုင်လုပ်ပါလားပြောလည်းဘယ်သူမှစိတ်မ၀င်စားဘူး။ အကုန်ရနေတာကုိုး ။း)
မျိုးခန့် ပုပ္ပား July 24, 2015 at 7:28 AM
မနက်က ဘုရားဆွမ်းကပ်ပြီးဝင်ကြည့်သေးတယ် ဘာမှမစားရသေးတော့ဗိုက်ဆာလို့ပြန်ပြေးတာ :)
အရမ်းပျော်ပါတယ်... :) နောက်တင်မည့်ပို့စ်များလည်းမျှော်နေပါတယ်
ဖန်တီးမှုကတော့မျိုးကုိုစုံနေတာဘဲပြောရမယ်။ ရှိတာနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာကိုး။
အဟုတ်ဘဲ။ အပြင်ရောက်မှ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက အခန့် သားစားခဲ့ရတာတွေကိုတန်ဘိုးကောင်းကောင်းသိလာတာ။
မမ ဆီ အခုမှပဲရောက်ဖြစ်တော့တယ် မ ရေ ....ပို့စ်အသစ်တွေ အားလုံး ကို တစ်ဝကြီး အားပေးသွားပါတယ်
စာအရေး အသားလဲကောင်း ဟင်းချက်လဲ တော်တဲ့ မမကို အမြဲ သတိရနေတယ်. စားချင်စဖွယ် ဟင်းတွေ မုန့် တွေ ကလဲ အများကြီးပဲ .ပေါင်မုန့်လဲ ကြိုက်တယ် ပူတင်းလဲ ကြိုက်တယ်...
Anonymous July 31, 2015 at 8:11 PM
မြှောက်တာတော်တယ်နော်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ပြုံးနေတော့တာ။
ကုိုယ်ကလည်းသတိရနေတာ။ ဘယ်မှာ ဘာတွေများလုပ်နေလဲလို့ ....း)
စူးနှယျလေး August 10, 2015 at 4:00 AM
စားစရာတွေ တဝကြီး လာကြည့် သွားပါတယ် လို့ :) သတိလည်း ရပါတယ် လို့....
Anonymous August 11, 2015 at 5:44 PM
စားစရာတွေတ၀ကြီးလာကြည့်သွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ..